I-China T-bolt enomakhi wezinto zasentwasahlobo wasentwasahlobo kanye namaFekthri | IGlorex
Ingafakelwa nesiphethu esisebenza esindayo, ngokuqhathanisa intwasahlobo ejwayelekile, esilungele ukuxhumeka kwamapayipi wemishini ephezulu esindayo.
Ukuthayipha kwensimbi noma umbhalo we-laser.
Ukuhlanganiswa okujwayelekile isikhwama sepulasitiki, ibhokisi le-carton ngaphandle. Ilebula kuzoba sebhokisini.
Sinohlelo oluphelele lokuhlola kanye namazinga ekhwalithi aqine. Amathuluzi wokuhlola anembile futhi bonke abasebenzi bayizisebenzi ezinekhono ezinekhono elihle lokuzihlola. Ilayini ngalinye lokukhiqiza lifakwe umhloli osezingeni elifanele.
Le nkampani inezimoto eziningi zokuhamba, futhi isisungule ubudlelwano bokubambisana besikhathi eside nezinkampani ezinkulu zezinto, i-Tianjin Airport, i-Xingang neDongjiang Port, ivumela ukuthi izimpahla zakho zilethwe ekhelini elibekiwe ngokushesha kunangaphambili.
I-T-bolt ejwayelekile enesiphethu sentwasahlobo isetshenziselwa ukufanisa ukuxhumana kwe-hose yerhasi yenjini yedizili. Intwasahlobo esindayo ilungele ukuthuthwa okukhulu kwezimoto zemidlalo nokuxhuma kwefomula yokushayela i-hose.
Izinzuzo Zokuncintisana Okuyisisekelo:
I-T-bolt enama-spring clamp inezimpawu zesivinini sokulayishwa okusheshayo, kulula ukuyihlukanisa, ukufaka umfaniswano ngokufana, okuvuselelekayo kakhulu futhi kungancishiswa ngokwemvelo ngombala we-hose ukuze ufinyelele kumphumela wokuqina. Yakhelwe ukunyakaza okuqinile nokusetshenziswa okukhulu kwesilinganiso esikhulu esivamile kumaloli asindayo, imishini yezimboni, imishini engeyona yomgwaqo, ukunisela ngezolimo nemishini.
ama-PC / ibhokisi
usayizi we-carton (cm)
Esedlule: Irubber (yokulungisa ama-clamp)
Ukuqina okuqinile ngamabhulini aphindwe kabili
Ukuqina kugqame nge-trunnion eqinile